Wararka Maanta: Sabti, Apr 7 , 2012-Al-shabaab oo sheegtay inay xoogageedu weli gudaha Muqdisho kula dagaalamayaan AMISOM iyo Dowladda KMG ah
Al-shabaab oo sheegtay inay xoogageedu weli gudaha Muqdisho kula dagaalamayaan AMISOM iyo Dowladda KMG ah Sabti, Abriil 07, 2012 (HOL) — Xarakada Al-shabaab ayaa war-saxaafadeed ay soo saartay maanta oo Sabti ah ku sheegtay in xoogaggeedu ay weli gudaha Muqdisho kula dagalamaayaan ciidamada AMISOM iyo kuwa dowladda KMG ah, kaddib sideed bilood markii ay banneeyeen furumaha dagaalka ee Muqdisho. "Tan iyo markii ay mujaahidiintu si xeeladeysan u banneeyeen furmaha dagaalka ee Muqdisho waxay wadeen weerarro gaadmo ah oo ay la beegsanayaan saldhigyada AMISOM iyo xarumaha hay'adaha dowladda," ayaa lagu yiri warsaxaafadeedka ay soo saartay Al-shabaab.
Xarumaha dowladda ee ay beegsadeen ayaa waxay ku sheegeen inay ka mid yihiin madaxtooyada, tiyaatarka, xafiisyadii wasaaradaha dowladda iyo kuwo la mid ah. Iyagoo sheegay in mujaahidiinta oo kaashanaya ALLE ay beegsan doonaan goob walba oo ay Muqdisho kaga sugan yihiin waxay ugu yeereen cadowga Islaamka.
Sidoo kale, Al-shabaab waxay sheegtay in ciidamada AMISOM oo ay ku sheegeen soo duulayaal in saldhigyadooda ay la beegsan doonaan weerarro toos ah, ayna ku guuleysan doonaan hadafkooda.
"AMISOM waxay dhowr jeer isku dayeen inay qabsadaan degmada Dayniile iyagoo adeegsanaya dacaayado been ah iyo hub culus, balse way u suurogeli wayday kaddib markii Mujaahidiintu ay ka hortageen," ayay Al-shabaab ku sheegtay warka ay soo saartay.
Waxay sheegeen in Muqdisho uusan ammaan ka jirin, taasna ay caddeyn u tahay awood xumada ciidamada AMISOM iyo kuwa dowladda KMG ah, iyagoo xusay inay saraakiisha AMISOM iyo kuwa dowladdu ku bixi doonaan gacanta mujaahidiinta.
"Shacabka Muqdihso waxaan ugu baaqaynaa inaysan u fududeyn waxyaabaha ay doonayaan ciidamada AMISOM, ciddii caawisana waxay mujaahidiintu ku beegsan doonaan goob walba oo ay ku arkaan sida Muqdisho," ayaa lagu yiri warka kasoo baxay Al-shabaab.
Ugu dambeyn, Al-shabaab waxay ku sheegtay warsaxaafadeedkeeda in meel qura looga soo wadajeesto ciidamada AMISOM ee caawinaya dowladda KMG ah, si loogu guuleysto in dalka laga saaro.
Hadalka Al-shabaab ayaa wuxuu imaanayaa xilli 100 ka tirsan ciidamada AMISOM la geeyay degmada Baydhabo, kuwaasoo qayb ka ah 2,500 oo askari oo la doonayo inay ka howgalaan gobolka Bay.Maxamed Xaaji Xuseen, Hiiraan Onlinemaxuseen@hiiraan.comMuqdisho, Soomaaliya
Sabti, Abriil 07, 2012 (HOL) — Munaasabad lagu maamusayay Kooxda SYS (Ex Skiftinge) oo sanad jirsatay ayaa lagu qabtay Magaalada Eskilstuna ee dalka Sweden, iyadoo munaasabaddana ay ka qeybgaleen bahda Isboortiga Magaalada, saxafiyiin iyo siyaasiyiin. Abaanduulaha Ciidamada Milateriga Dowladda Soomaaliya oo ka badbaaday isku-day la doonayay in lagu qaarijiyo 4/7/2012 2:55 AM EST